FANAFIHANA TENY AMBOHIJANAKA
Valo lahy mitazona basy marovava na kalachnikov no nanafika ny toeram-pivarotana enta-madinika iray tetsy Ambohijanaka.
Olona roa no nogadraina vonjimaika ao Tsiafahy tamin'ity raharaha ity ary tsy iza fa namana akaiky an'ilay raim-pianakaviana ihany. Herintaona sy tapany aty aoriana izany dia andeha ihany ny fitsaràna ity heloka bevava izay nalaza erak'Antananarivo ity.
Apetraky ny tompony eo ampovoan'ny rond point etsy Anosibe ny moto amidy ary asiany ny laharana finday hahazoana azy. Gaga ny olona satria zava-maintso no tokony maniry eo ary tena manaratsy endrika tanteraka ilay toerana ny fisian'ilay moto. Dia tsy nisy tompon'andraikitra iray izay mba nandray fanapahan-kevitra nanala izany fa samy nijery fotsiny teo. Baranahiny tanteraka.
HAMBOLENA HAZO ENY SOAMANDRAKIZAY
Efa nisy fifanarahana manokana natao tamin'ny fiangonana katolika nahafahana mametraka ilay toerana fambolena zana-kazo etsy Soamandrakizay. Tena navadika ho fambolena tanteraka arak'izany ilay toerana nandraisana an'ny Papa Ray Masina amin'izao. Zana-kazo 10 tapitrisa no hambolena eo amin'ity toerana ity.
ASA KITOATOA ATAON’NY DEPIOTE
Tsy mandraharaha amin'ny asa tokony ataony mihitsy ny solombavambahoaka amin'izao fivoriana ara-potoana izao. Zara raha mandeha ny fandinihana ny tetibolam-panjakana 2020 izay efa ho iray volana izao no nalefa tao. Hatramin'ny 30 novambra anefa no tokony handanian'ny solombavambahoaka izany. Mbola variana amin'ny fampielezan-kevitra ihany koa ireo solombavambahoaka fa tsy tena manao ny asany.
TAITAITRA AMIN’NY ZAVA-BAOVAO
Tapohan'ny zava-baovao tanteraka ny malagasy. Omaly dia efa raikitra sahady ny filaharana ho ao amin'ny KFC ary niteraka fitohanan'ny fifamoivoizana aza izany. Etsy ankilan'izany dia mbola mitohy ny fanakianan'ny olona ny talen'ny serasera eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika momba ny vava tsy ambina miendrika fanambaniana ny gasy izay nataony. Dia mbola tsy tonga saina ihany ny Filoha fa efa simbain'ireo vehivavy manodidina azy.
DOKOTERA NISY NAKA AN-KERINY
Dokotera iray no nisy naka an-keriny tao Morarano-Chrome. Andian-jiolahy mirongo fiadiana no naka azy tao an-tranony ny hariva'ny alatsinainy teo, tokony ho tamin'ny fito ora sy sasany hariva. Lasa mirona any amin'ny mpiasam-panjakana indray izao ireo mpaka an-keriny any ambanivohitra raha ny tsikaritra tamin'ny tato ho ato.